Imizekelo ebalaseleyo yeKazuo Oga enkulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Las Studio Ghibli bhanyabhanya oopopayi nganye kwezi ikhutshwe kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo inento ekhethekileyo. Ikwanayo nesitayile ekulula ukuba sibaqonde xa sibona abanye babalinganiswa babo okanye ezo mvelaphi dlulisa imizwa ethile etyebisayo. Kukulungelelaniso lwawo onke amacandelo kwicandelo ngalinye lobugcisa elikwaziyo ukukhupha zonke iintlobo zokuphefumlelwa.
UKazuo Oga ngomnye wabo banegalelo kwezo mvakalelo ngemali kwiifilimu ze-Studio Ghibli ezimnika yena ubunzulu obuyimfuneko kunye nokutsha ukuze bonke abalinganiswa abasikhuthazayo ukuba siqhubeke nokuhlala kunye namanye amandla kunye neemvakalelo zokudlula kubo. I-Oga inokufumaneka kwi-Princess Mononoke, ummelwane wam uTotoro, okanye iTale yeNkosazana uKuya.
Umfanekiso wentloko imele isitayile sakhe kunye nokutsha kwemeko-bume abafumana intetho yabo ephezulu kwiPrincess Mononoke, ifilimu yoopopayi endikucebisayo ukuba awuyibonanga.
Ngale ndlela ye uhamba ngephalethi enkulu yemifuno kwaye mthubi, u-Oga uyakwazi ukuvumela ukuba imitha yelanga iwele ukuthintela amagqabi elo hlathi apho ikhoyo loo ndlu.
U-Oga uyakwazi ukutyebisa amabali agqitha phambi kwemizekeliso yakhe kunye nayo nayiphi na imvelaphi enokufumaneka nakweyiphi na kwezi zefilimu ze-Studio Ghibli ezifanelekileyo. Thetha ngobuchule bakhe kunye nokuthanda kwakhe okukhulu Umbala.
Sinayo ithamsanqa elikhulu lokukwazi ukufikelela wayesazi Iphepha le-Facebook nakwividiyo oyifumana kule migca ibonisa umboniso owenziwe kwi Studio Ghibli apho u-Oga ngokwakhe aphawula ngeenkcukacha zala macwecwe. Umzobi obalaseleyo kunye nomlawuli wezobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imvelaphi entle kaKazuo Oga, omnye wamagcisa achonga iStudio Ghibli